ဂူဂဲလ်၏ပထမစာမျက်နှာကိုရယူရန်အတွက်လျှို့ဝှက်ချက် - Semalt အကြံပေးချက်
မင်းလိုချင်တာကိုလူတိုင်းလိုချင်တာငါသိတယ်။ ဂူဂဲလ်၏ပထမစာမျက်နှာကိုရယူပါ။ စျေးကွက်အသစ်များနှင့်ဖောက်သည်အသစ်များအားဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ဖောက်သည်များသည်သင်၏လုပ်ငန်း၏အသက်သွေးကြောဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သူတို့ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၌ passive နည်းလမ်းဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါကသင်၏လုပ်ငန်း၏အနာဂတ်နှင့်ရှင်သန်နိုင်မှုကိုသေချာစေသည်။
SEO ဆိုသည်မှာခါးသီးသောအမှန်တရားကိုပြောပြရန်အချိန်ကျပြီဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တိုးတက်အောင်လုပ်သည့်အခါလူတိုင်းလျစ်လျူရှုထားသည့်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိသည်။ ယနေ့တွင် Semalt သည်ဤလျှို့ဝှက်ချက်ကိုသင့်အားပြလိမ့်မည်။
မင်းရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုကြာရှည်စေမှာမဟုတ်ဘူး။ ဂူဂဲလ်၏ပထမစာမျက်နှာတွင် ၀ င်ရောက်ခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲ။ အောက်တွင်ဖတ်ပါ။
သင်ရှောင်ရှားသင့်သော SEO လိမ်လည်မှု ၁၀ ​​ခု
သို့သော်ပြtheနာမှာသူ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အတွက်မကောင်းသောရည်မှန်းချက်မဟုတ်ဘဲနည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်အင်တာနက်၏အဖြစ်မှန်တို့ကိုမသိခြင်းဖြစ်သည်။ ထိပ်ဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုမသိနားမလည်ခြင်းနှင့်လျှော့တွက်ခြင်းများစွာလည်းရှိသည်။
ကမ္ဘာတစ်လွှားမှကျွမ်းကျင်သူထောင်ပေါင်းများစွာ၊ အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှပညာရှင်များသည် SEO ကိုအမြတ်အစွန်းများများ ပေး၍ ဂူဂဲလ်၏ရှေ့မျက်နှာစာတွင်ပေါ်လာစေခြင်း၏ယုတ္တိဗေဒအရဤမသိနားမလည်မှုအတွက်ငါးဖမ်းရန်ကြိုးစားနေကြသည်။
သင်တို့တွင်များစွာသောသူဖြစ်ရန်အချိန်နှင့်ငွေမရှိသောကြောင့် SEO ကျွမ်းကျင်သူများ သင်ကိုယ်တိုင် Semalt ကသင်ရှောင်ကျဉ်သင့်သည့် SEO ကျွမ်းကျင်သူများဟုခေါ်သည့်ရိုးရှင်းသောဥပမာ ၁၀ ခုကိုပေးလိုသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် SEO လိမ်လည်သူများစွာသည် အကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့ကိုပေးဆပ်ပါက၎င်းတို့သည် Google တွင်လစဉ်လတိုင်းအာမခံသောရလဒ်များရရှိလိမ့်မည်ဟူသောစကားစုကိုအာရုံစိုက်သည်။ သို့သော်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်အော်ဂဲနစ်ရလဒ်များကိုထိန်းသိမ်းရန်မှာမဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည်။
ဂူးဂဲလ်ကိုယ်တိုင်ကသေချာသည့်ရလဒ်များရရှိရန်တောင်းဆိုသူများအားအဖြေပေးခဲ့သည်။ သင်ဂူဂဲလ်ထိပ်သို့ထွက်လာလိမ့်မည်ဟုမည်သူမျှသက်သေမပြနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ထပ်ဆင့်သွားပြီးသင့်အားပြိုင်ဆိုင်မှုကော်မရှင်၏အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်။
မည်သည့် SEO ကုမ္ပဏီမှဂူဂဲလ်နှင့်အထူးသီးသန့်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၈၈၀၀၀ မှအနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခပေးသောဂူဂဲလ်၏လစာကောင်းသောအမှုဆောင်အရာရှိများ ဦး စွာထွက်ရန်ရာဂဏန်းအနည်းငယ်ကိုလက်ခံရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
အခမဲ့ SEO ဝန်ဆောင်မှုစမ်းသပ်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းမှုများ
SEO သည်အလွန်နည်းပညာရှိပြီးအကောင်အထည်ဖော်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ပြည်ပမှကုမ္ပဏီများသည် SEO နှင့်လုံးဝမပတ်သက်သည့် FTP စကားဝှက်များကိုသင့်အားသူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့စမ်းစစ်ရန်တောင်းဆိုကြသည်။
လွယ်ပါတယ်! ဒါကငါ့အဖွားပဲ! သို့သော်ဂူးဂဲလ်သည်အင်တာနက်ရှာဖွေရေးစျေးကွက်၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အတွက်ထောင်နှင့်ချီသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုအဘယ်ကြောင့်နှောင့်ယှက်ရမည်နည်း။
တကယ်လို့ဒီနေ့မှာတကယ်တမ်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ၅ လုံးရှိမယ်ဆိုရင်ငါဟာ Google, Bing, Yandex, Baidu တို့ကိုရေတွက်လိမ့်မယ်။ အခြားသူများမှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမဟုတ်ပါ။
ဝှက်ထားသောနှင့်လျှို့ဝှက် SEO ဆိုသည်မှာမဟာဗျူဟာများ
SEO တွင်မည်သူမဆိုမှော်အတတ်ရှိပါသလား။ မည်သည့်တရားဝင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင် ဦး ထုပ် SEO ကုမ္ပဏီသည်မှော်သို့မဟုတ်ဝှက်ထားသောစွမ်းရည်များမရနိုင်ပါ။ ဂူဂဲလ်မှနောက်ပိုင်းတွင်အပြစ်ပေးခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သော Black Hat SEO နှင့်မဆက်ဆံပါက။
သော့ချက်စာလုံးပြိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မူတည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတရားဝင်သည်။ ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းကဲ့သို့သောအပြိုင်အဆိုင်များသောစျေးကွက်တွင်သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင်ဒိုမိန်းအခွင့်အာဏာအပြည့်အ ၀ မရရှိပါကသော့ချက်စာလုံးအစားသော့ချက်စာလုံးကိုမသုံးလျှင်ဂူးဂဲလ်ထိပ်ကိုရောက်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်တွင် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်မရှိပါက ၄၈ နာရီအတွင်းမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှသင့်ကို Google ၏ပထမစာမျက်နှာတွင်တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။
ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုကအရမ်းကိုကောင်းလွန်းနေရင်အဲဒါမမှန်လို့ပါ။ The SEO အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်အချိန်နှင့်ငွေများလိုအပ်သည်။ SEO တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သင့်တွင်ငွေမရှိလျှင်၊ သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်သင်ယူခြင်းသည်အချိုးအစားမမျှတစွာစျေးကြီးသည့်အရာအတွက်အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားခြင်းထက်ပိုကောင်းသည်။
အမှန်တရားကတော့ Google Partners အမှတ်အသားသည်တစ်စုံတစ်ယောက်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီသည်ဂူဂဲလ်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီးမှသာရည်ညွှန်းသည်။ အခြားဘာမှမရှိဘူး! ဂူးဂဲလ်တွင် SEO ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်တွဲဖက်ဖြစ်သော Yellow Pages ကဲ့သို့အင်တာနက်လမ်းညွှန်များမရှိပါ။ သင်တို့အားဟောပြောသောသူသည်ကား၊
အကယ်၍ Google ကဤအရာကိုထုတ်ဖော်ပြလျှင်၎င်းသည်သင်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုခဏသာအာမခံလိမ့်မည်။ ဂူဂဲလ်၏ရှာဖွေရေး algorithm သည်ပြောင်းလဲပြီးနေ့စဉ်ပြောင်းလဲသည်။ သာ SEO ကျွမ်းကျင်သူများ ထင်မြင်ချက်ကိုကြိုးစားသို့မဟုတ် algorithm ကိုပြောင်းလဲမှုများကိုခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ဂူဂဲလ်မှထည့်သွင်းစဉ်းစားသော SEO အချက် ၂၀၀ ခုသည်ဤယူဆချက်များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
SEO ကုမ္ပဏီအများစုသည်မူပိုင်ခွင့်ကိုပိုင်ဆိုင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သူတို့၏ဖောက်သည်ကိုယ်စားအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးကြသည်။ ဒါကနည်းနည်းထူးဆန်းပါတယ် သင်ပေးချေသမျှသည်သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်သင့်အတွက်သာဖြစ်သင့်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကတူညီသောအကြောင်းအရာကိုသင်၏ပြိုင်ဘက်သို့ကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းစဉ်သည် SEO ၏လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သည်။ ငါပြောခဲ့တာတွေအားလုံးကိုဂူဂဲလ်ထိပ်မှာပေါ်လာဖို့အတွက်လျှို့ဝှက်ချက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာမင်းပြောနိုင်တယ်။ သို့သော်ဆက်လုပ်၊ အောက်တွင်ဖတ်ပါ။
ဂူးဂဲလ်၏ပထမစာမျက်နှာသို့ ၀ င်ရောက်ရန်လျှို့ဝှက်ချက်မှာဂူဂဲလ်သည်လည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းင်း၏ algorithm ကိုပြောင်းလဲခြင်းမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊
ခက်ခဲသောအလုပ်သည်ဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်။ SEO တွင်ကြိုးစားခြင်းသည်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်အားအလင်းရှာဖွေရေးနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ခက်ခဲသောအလုပ်အကြောင်းပြောဆိုခြင်း၊ သင်တို့အများစုသည်ငါနှင့် SEO ကိုမကျေမနပ်ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဂူဂဲလ်မှသာကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမျက်နှာသာပေးရမည့်မှော်ခလုတ်တစ်ခု၊ လှည့်ကွက်တစ်ခုသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်ဆော့ဖ်ဝဲများကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုကိုမျှော်လင့်နေလိမ့်မည်။
ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဂူဂဲလ်တွင်အဆင့်မြင့်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကိုတစ်ခါမျှမသုံးစွဲပါကငွေရှာသည်ကိုတစ်ခါမျှမမြင်ဖူးပါ အကြောင်းအရာဖန်တီး နှင့်အကြောင်းအရာ backlinks ။ ဂူဂဲလ်တွင်အကြောင်းအရာမည်မျှနှင့် backlinks မည်မျှလိုအပ်သနည်း။ ငါအတိအကျမသိပေမယ့်သင်မစခင်ခင်ဗျားထင်ထားတာထက်အများကြီးပိုပါတယ်။
SEO နှင့် ၁၀၀၀၀ နာရီအုပ်ချုပ်မှု
အောင်မြင်မှုကိုမအောင်မြင်သောသူနှင့်ခွဲခြားသောအတားအဆီးတစ်ခုရှိပြီးနာရီ ၁၀၀၀၀ အတားအဆီးဖြစ်သည်။ အောင်မြင်မှုရရန်အနုပညာတစ်ခုသို့မဟုတ်အလုပ်တစ်ခုတွင်နာရီ ၁၀၀၀၀ ကြာလေ့ကျင့်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်နာရီ ၁၀၀၀၀ လိုအပ်တယ်။
ဒီတော့ SEO တွင်အောင်မြင်ရန် သငျသညျအလေ့အကျင့်, စမ်းသပ်မှုများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း၏နာရီ 10000 လိုအပ်ပါတယ်။ လူအများစု၏ယုံကြည်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်စွာပင်၊ အရည်အချင်းတစ်ခုသည်လူတစ် ဦး ၏နယ်ပယ်အတွင်းရှိလူတစ် ဦး ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်ဖြစ်သည်၊ Semalt သည်သူ၏သီအိုရီနှင့်အတူအရာအားလုံးကိုမှောက်လှန်ခဲ့သည်။
ထိပ်တန်းဂီတပညာရှင်များ၊ စစ်တုရင်ကစားသမားများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ စီးပွားရေးသမားများ၊ အားကစားသမားများစသည်တို့ကိုလေ့လာပြီးပါကအနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းအနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်ခန့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး သို့မဟုတ်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်နိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။ ။
၁၀၀၀၀ - ၅၀၀၀ မှ ၂,၀၀၀ နှင့်နာရီ ၁၀၀၀ တန်ဆည်များ
၎င်းသည်သူတို့၏တေးသီချင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သူတို့သုံးစွဲခဲ့သောအချိန်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားသောဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ ဒါကြောင့်နာရီ ၁၀,၀၀၀ ကနေ ၅,၀၀၀ နဲ့ ၂,၀၀၀ အတွင်းကန့်သတ်ချက်တွေကထူးခြားတဲ့၊ ကောင်းတဲ့၊
နာရီ ၁၀၀၀ သည်အစကန ဦး ၏အတားအဆီးကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်နှင့်အောင်မြင်မှု၏အခြေခံအရည်အချင်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများနှင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များရှာဖွေနေသည့်မှန်ကန်သောအရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးပါက၊ Google ၏အခြေခံမြင်သာမှုကိုရရှိရန်အရည်အသွေးကောင်းနောက်ကျောပေါင်း ၁၀၀၀ ကိုအရင်ဖန်တီးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏အနေအထားကိုသေချာစေရန်နောက်တစ်ဆင့်မှာအရည်အသွေးရှိသော backlink ၁၀,၀၀၀ ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
10000 အရည်အသွေး backlinks သင် Google ၏ပထမ ဦး ဆုံးစာမျက်နှာကနေခွဲထုတ်
SEO ကျွမ်းကျင်သူအများစုသည်အပြိုင်အဆိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ထိပ်ဆုံးသော့ချက်စာလုံး ၁၀ လုံးအတွက်သင့်ပြိုင်ဘက်များနှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်များအားတိုင်းတာခြင်းစသည်ဖြင့်စတင်သည်။ SEO ကိုဤချဉ်းကပ်မှုသည်ခေတ်မမီတော့၊ မလုံလောက်ပါ၊ အဝေးကြီးနှင့်မှားယွင်းနေသည်။
ဤအရာကို myopic SEO သို့မဟုတ် SEO MYOPIA ဟုခေါ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤနည်းဖြင့်သော့ချက်စာလုံးတစ်လုံးဖြစ်သောသစ်ပင်ကိုသင်ရရှိခြင်းနှင့်သင်၏သစ်တောကိုသော့ချက်စကားစုများဖြင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်နိုင်သောအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များစုပေါင်းထားသောသစ်တောကိုသင်ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်သည်။ သော့ချက်စာလုံးများသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုပထမဆုံးအကြိမ် ၀ င်ရောက်မည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသို့မဟုတ် visitors ည့်သည်များမှစုစုပေါင်းအော်ဂဲနစ်လမ်းကြောင်း၏ ၉၀% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် (သို့) ၁၀၀၀ မှတစ်ရက်လျှင် 1000 ည့်သည် ၁၀၀ ရှိလိုပါသလား။
သင်တစ်ထောင်လိုချင်လျှင်သင်အာရုံစိုက်သင့်သည် အစစ်အမှန် SEO ဆိုသည်မှာ နှင့်ရှာဖွေမှုများ, အဆင့်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော paparazzi နှင့်အတူ SEO ဆိုသည်မှာကုမ္ပဏီများစု၏အမှိုက်ပေါ်မှာ။
အစစ်အမှန် SEO ဆိုသည်မှာ အော်ဂဲနစ်အသွားအလာများတိုးလာခြင်းနှင့် customers ည့်သည်များအားဖောက်သည်များသို့ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့်သာတိုင်းတာသည်။
SEO အစစ်အမှန်သည်ခက်ခဲသောအလုပ်များစွာလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းကိုလုပ်သူမှာအလွန်နည်းပါးသည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်၊ ၎င်းအတွက်ပေးချေသူများစွာက - အကယ်၍ သင်သည်သူတို့ထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကုန်ဆုံးနေပြီ၊ ဤဆောင်းပါးကိုလေ့လာရန်အချိန်ယူရသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ SEO နှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောဗဟုသုတကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည် ဝက်ဘ်ဆိုက်မြှင့်တင်ရေး။
ဝက်ဘ်ဆိုက်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခြင်း၊ သင့်စီးပွားရေးအတွက်အလိုအလျောက်မြှင့်တင်ရေးပလက်ဖောင်းကို semalt မည်သို့တင်ပြသည်ကိုကြည့်ကြစို့။
သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံး SEO ဝန်ဆောင်မှုသုံးခုကိုရှာဖွေပါ။
တိုတောင်းသောအသုံးအနှုန်းများအတွင်းအလွန်ကြီးစွာသောရလဒ်များကို; ဤ SEO package သည်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအတွက်စစ်မှန်သော "အိမ်" ဖြစ်သည်။
သင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖန်တီးသည်။ သို့သော်သူတို့ကို Google SERP ၏ထိပ်တန်းရာထူးများသို့မည်သို့မောင်းနှင်ရမည်ကိုမသိပါ။ သင်၏ SEO အစီအစဉ်ကိုစတင်ရန်အတွက် ၀.၉၉ ဒေါ်လာသာကျသင့်သည်။ သင်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်အောင်ပြုလုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ယခုတွင်သင့်အားအွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမြှင့်တင်ရန်သင်လိုအပ်သမျှရှိသည်။ သင်သည်သင်၏စီမံကိန်းများအတွက်ဤအဖြူရောင် ဦး ထုပ် SEO နည်းစနစ်များကိုသုံးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောနည်းပညာကို အခြေခံ၍ SEO ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအားဖြင့်သင်၏ဖောက်သည်များအားဖောက်သည်များအတွေ့အကြုံပိုမိုပေးနိုင်သည်။ သင့်အတွက် AutoSEO အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုပါ။ စျေးနှုန်းချိုသာအမြန်ရလဒ်များ၊ ၁၀၀% ထိရောက်မှု
သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအဆင့်မြင့် SEO နည်းလမ်းများ။
ဤအထုပ်သည်သာမန် SEO ဝန်ဆောင်မှုထက်များစွာကောင်းသည်။
ပံ့ပိုးမှု & အတိုင်ပင်ခံ
သင်၏ကုမ္ပဏီကို Forbes World ၏အကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီစာရင်းတွင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ရောင်းဝယ်မှု၊ အမြတ်အစွန်းနှင့်မိတ်ဖက်ခြင်းဟူသောလျှို့ဝှက်ချက်သုံးခုသာပါဝင်သည်။ ပြီးတော့ FullSEO သင်၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအတွက်သူတို့ကိုပေါင်းစည်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် SEO အဖွဲ့သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရေးနှင့်ဝက်ဘ်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်တစ် ဦး ချင်းအစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲပြီးအကောင်အထည်ဖော်သည်။ သင်၏ကော်ပိုရိတ်ဝဘ်ဆိုက်သည် Google အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုတွင်ပထမဆုံးနေရာယူလိမ့်မည်။ လူများသည် ၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိသီးခြားကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ကျွန်ုပ်တို့မောင်းနှင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Semalt Web Analytics မှ
Google TOP10 သို့အတိုဆုံးနည်းလမ်းကိုဖော်ပြသည်။ လမ်းကြောင်းပေါ်ဆက်သွားရန် Semalt သော့ချက်ကျသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စစ်ဆေးမှုနှင့် Web Analyzer ကိုသုံးပါ။
On-စာမျက်နှာ optimization အမှားများကိုဖော်ထုတ်ပါ
ပြည့်စုံသော web အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အစီရင်ခံစာများကိုရယူပါ
သင်ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရန်ကြိုးစားနေသော်လည်းမအောင်မြင်ပါသလော။ ဖောက်သည်များကသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရှာမတွေ့နိုင်သလား။ အခမဲ့ Semalt ဝက်ဘ် Analytics မှ tools များသုံးပြီးအဖြေများကိုစစ်ဆေးဆန်းစစ်ပါ။ အွန်လိုင်းသော့ချက်စာမေးပွဲအဆင့်တွင်စစ်ဆေးသူသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရာထူးများကို Google SERPs တွင်ပြသပြီးမြှင့်တင်ခြင်းအတွက်သော့ချက်စာလုံးများကိုအကြံပြုသည်။ လူတွေကဘာကိုရှာနေတာလဲ၊ သူတို့လိုချင်တာကိုပြောပြပါ။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏အနေအထားကိုစောင့်ကြည့်ပါ၊ သူတို့၏အောင်မြင်မှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသပြီးသင်၏အွန်လိုင်းမြှင့်တင်ရေးအတွက်အသိပညာအသစ်ကိုအသုံးပြုပါ။ သင်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်၎င်းတို့အားဆန်းစစ်ရန်ပုံသေအမှားအယွင်းများနှင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများကိုထုတ်လုပ်ပါ။ ဝဘ်ဆိုက်ဂုရုဖြစ်လာပြီးသင့်ဝဘ်ဆိုက်ကိုသင့်ကိုချမ်းသာစေပါစေ။